Liyini ipulatifomu yeDemand-Side (DSP)? | Martech Zone
NgeSonto, uJanuwari 15, 2017 NgeSonto, uJanuwari 15, 2017 Douglas Karr
Ngenkathi kukhona amanethiwekhi amaningana esikhangiso lapho abakhangisi bengathenga imikhankaso futhi baphathe imikhankaso yabo, amapulatifomu ohlangothini lokufunwa (DSPs) - kwesinye isikhathi kubhekiselwa kubo njengo- amapulatifomu wokuthenga - ziyinkimbinkimbi kakhulu futhi zinikezela ngamathuluzi amaningi abanzi ukukhomba, ukubeka amabhidi wesikhathi sangempela, ukulandelela, ukubuyisela emuva, nokuqhubekisela phambili ukwabiwa kwezikhangiso zabo. Amapulatifomu ohlangothini lwesidingo avumela abakhangisi ukuthi bafinyelele ezigidigidini zokuvela kuhlu lwezikhangiso ezingafinyeleleki kuzingxenyekazi ezifana nosesho noma ezenhlalo.
Ngaphandle kokukhulisa ukufinyelela, ama-DSP anika amandla nomkhangisi ukukhulisa imbuyiselo yakhe yokukhangisa kutshalo-mali ngokukhomba okwehlukile, ukubhida kwesikhathi sangempela, nokwenza kahle komkhankaso.
Ipulatifomu eseceleni kwesidingo (i-DSP) yipulatifomu evumela abathengi bokusungula ukukhangisa kwedijithali ukuphatha ama-akhawunti amaningi wokushintshaniswa kwezikhangiso kanye nama-akhawunti ngokushintshana nge-interface eyodwa. Inhloso yalezi zinhlelo ukuvumela abakhangisi ukuthi basebenzise imali abayisebenzisile yezikhangiso futhi bathuthukise izindleko zabo ezisebenzayo ngokuchofoza ngakunye (eCPC) nezindleko ezisebenzayo nge-Action (eCPA) ngayinye.
Nawu umdwebo oqinile wenqubo kusuka kwaSitescout - kusuka kumkhangisi kuya kuzethameli:
Yini i-eCPA? eCPC?
Izindleko ezisebenza ngesenzo ngasinye (i-eCPA) isilinganiso sokusebenza kwempahla yokusungula yokukhangisa ethengwe ngumkhangisi ngenani lokubonwayo ngakunye, noma kubiza ngesisekelo sokuvezwa esiyinkulungwane (CPM). Uma leso silinganiso kungukuchofoza kwangempela, kungabuye kubhekiswe kukho njengezindleko ezisebenzayo ngokuchofoza ngakunye (eCPC)
Izenzo zingalandelelwa ngokulandela ikhukhi, ukulandelela ngokuchofoza, ukulandelela ukuguqulwa kwekhasi lokufika, ukulandelela ikholi yefoni, noma ukukhishwa kwekhodi yephromoshini.
Uhlu lwama-DSP aholayo
I-Adobe Media Optimizer - Isixazululo sohlelo sokuthenga isikhangiso esikusiza ukuthi ubikezele ukuxuba okuhle kakhulu kosesho, ukubonisa, nezikhangiso zenhlalo ngokususelwa kubhajethi yakho. Iphinde isebenzise ukwenziwa kohlelo lwakho lwemidiya futhi ikusize uthole indlela engcono kakhulu yokuletha okuqukethwe okufanele kwizethameli zakho zenani eliphezulu. I-TubeMogul nayo manje iyingxenye ye-Adobe.
AppNexus - I-AppNexus Console ihlanganisa ukuhleleka kanye namathuluzi ahlelwe ngamandla aphezulu asiza abathengi ukuthi babone ukwahlukaniswa kwesikhathi sokuya kunani nokushesha kwesisombululo ..
IzethameliSayensi - I-AudienceScience yiyona ehamba phambili ye-SaaS-based Advertising Automation suite, eletha ubulula nokuziphendulela kubakhangisi emhlabeni wonke.
IdathaXu - IDathaXu iyidatha ezimele, eqondaniswe nomakethi eyi-100% futhi analytics inkampani yezobuchwepheshe.
Imenenja ye-DoubleClick Bid - Phatha amabhidi akho bese uxhuma nezithameli zakho kuwo wonke amadivayisi ngeplatifomu yokuthenga ehleleke kakhulu.
I-FIKSU - UFiksu DSP unedatha nobuchwepheshe ukwenza imikhankaso yakho yeselula iphumelele ngokwengeziwe
MediaMath - Ubuchwepheshe bethu kanye nezinsizakalo zethu zivumela abakhangisi ukuthi bakwazi ukufinyelela izethameli abazifunayo ngezinga abalidingayo ukuze bafeze imiphumela abayifunayo.
I-One by AOL - Amapulatifomu e-AOL anika amandla abathengisi abaphezulu emhlabeni kanye nemikhiqizo yabezindaba ukufinyelela abathengi kudeskithophu, iselula naku-TV ngokuhlangenwe nakho kwe-premium, ukuthenga okuhlelekile kanye nemikhankaso eqhutshwa ukusebenza.
Simpli.fi - Isibonisi, iselula, ividiyo kanye nenkundla yezenhlalo eyakhelwe imikhankaso yohlelo lwasendaweni.
Ibhayisikobho - I-SiteScout nguCentro iyipulatifomu ehamba phambili yokufuna ukuzenzela (DSP) yabasebenzi bokumaketha nama-ejensi, enika amandla imikhankaso yokubonisa, imikhankaso yeselula, imikhankaso yevidiyo, nemikhankaso ebheka kabusha.
I-StackAdapt - Ipulatifomu enamandla kakhulu emhlabeni yokusatshalaliswa kokuqukethwe. Khulisa okuqukethwe esikalini ngokufakwa kwezikhangiso zomdabu okuqondisiwe.
I-Tapad - UTapad ungumlingani weqiniso wokuthengisa wedivayisi. Noma ngabe inhloso ukukhulisa umyalezo wakho, ukubandakanya izithameli zakho noma ukuguqula idatha ibe ngamadola, sikwenza kwenzeke. Sihlanganisa idatha kuwo wonke amadivayisi ukuqonda izintshisekelo, izinkanuko nokuziphatha kwezithameli ezibaluleke kakhulu.
I-Trade Desk - I-Trade Desk iyipulatifomu yokuthenga ehlinzeka ukufinyelela kukho konke ukusungulwa kwe-RTB yokubukisa, ithelevishini, ividiyo, ezenhlalo, iselula, nokuningi. Abathengi bezindaba abasebenzisa imikhiqizo yethu bangaqhuba imikhankaso kuzo zonke iziteshi zemidiya eziku-inthanethi futhi babike ukuthi isiteshi ngasinye sihlangana kanjani ukuthonya ikhasimende labo.
Turn - Thatha umyalo wevolumu yedatha onayo ukukhomba, ukuqonda, nokuthola izethameli okudingeka ufinyelele kuzo ngemikhankaso yakho. Dala izingxenye ngokususelwa ekuziphatheni kwangempela komsebenzisi, sebenzisa amathuluzi we-Turn ukunweba ukufinyelela kwakho, bese uthumela idatha yakho ngqo kuzingxenyekazi zakho zokumaketha.
Tags: isifinyezoi-adobe media optimizerappnexusizilaleliesayensiipulatifomu yokuthengaIdathaXufuna ipulatifomu eseceleniimenenja yokubhida kabilidspecpaecpcIzindleko ezisebenzayo ngesenzo ngasinyeIzindleko ezisebenzayo ngokuchofoza ngakunyefiksuMediaMathngamunye nge-aolUhlelo lokukhangisaibhidi yangempela yesikhathiyenza lulaSoutcoutumastadaptithephuideski lokuhwebaamashubhubaphendukelayini ipulatifomu yokuthengayini ipulatifomu eseceleni kwesidingoyini i-dspyini ukubhida kwesikhathi sangempela